Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! नेप्सेको ओरालो यात्रा आज पनि जारी, कारोबार रकम पनि घट्यो
कोरोना संक्रमण जोखिमको बेला प्रभावकारी बन्दै अनलाइन श्रम स्वीकृति
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाडौंले हालै सुरु गरेको अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी बनेको छ । दैनिक एकहजारको हाराहारीमा सेवाग्राहीले अनलाइन प्रणालीबाट पुन: श्रम स्वीकृति लिएको कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
ग्लोबल संवाददाता शुक्रबार, माघ ७, २०७८, ११:२७:००
काठमाडौं । नेपाल र इजरायलबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार ९९ नेपाली श्रमिक पहिलो चरणमा इजरायल प्रस्थान गरेका छन् । बुधबार राति ६३ महिला र ३६ पुरुष गरी ९९ नेपाली श्रमिक इजरायल प्रस्थान गरेका हुन् ।
ग्लोबल संवाददाता बिहीबार, माघ ६, २०७८, ०९:१४:००
एपिएफ फुटबल क्लब आहा रारा गोल्डकपको सेमिफाइनमा ग्लोबल संवाददाता
क्यानद्धारा विश्वकपका लागि खेलाडी छनोट रासस
चन्दाकै भरमा काभ्रेमा ठडियो १ करोड लागतको गुम्बा
'नुवाकोटको सुनखानी-घलेभञ्ज्याङ-समुन्द्रटार सडक निर्माण साझा सवाल हो, कोही भ्रममा नपरौं' [भिडियो]
यसरी बन्दैछ नुवाकोट पञ्चकन्यामा घ्याङस्वाँरा पार्क [तस्बिरहरु]
‘विश्वव्यापी तामाङ शिक्षा कोष’ अवधारणामाथि सुझाव संकलन : कुन विज्ञले के भने ?
९ माघ, २०७८
ग्लोबल संवाददाता सोमबार, मंसिर १३, २०७८
ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ६ अङ्कले घटेर ४९५.४५ मा सीमित भएको छ । नेप्से परिसूचक ओरालो लागे जस्तै कारोबार रकम पनि रु चार अर्बमा सीमित भएको छ । कूल २२८ कम्पनीको ८२ लाख २५ हजार ८२२ कित्ता शेयर रु चार अर्ब ८९ लाख ३७ हजार १३३ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । सोमबारको कारोबारपछि बजार पूँजीकरण रु ३६ खर्ब ९२ अर्ब ७१ करोड ३० लाख ९० हजारको हाराहारीमा सीमित भएको छ ।
कारोबार भएका १३ उपसमूहमध्ये दुई उपसमूहको शेयर उकालो लाग्दा ११ उपसमूहको शेयर भने ओरालो लागेको छ । जलविद्युत् ०.५९ र सामूहिक लगानी कोष ०.०२ अङ्कले बढेको छ । बैंकिङ १०.८९, व्यापार ५.९४, होटल तथा पर्यटन ७३.३, विकास बैंक ६७.४४, वित्त ३१.९२, निर्जीवन बीमा ६७.८३, उत्पादन ६१.९५, अन्य ४१.१३, लघुवित्त ४०.८३, जीवन बीमा ११७.०४ र लगानी ०.६४ अङ्कले ओरालो लागेको छ ।
नेप्सेका अनुसार कारोबारका आधारमा महालक्ष्मी विकास बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो बैंकको रु ६१ करोड चार लाख ७५ हजार ३४० बराबरको कारोबार भयो । नेशनल हाइड्रोपावर रु १५ करोड १२ लाख तीन हजार ४४६, आइसिएफसी फाइनान्स रु १२ करोड ४९ लाख ४७ हजार ४१८, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी रु नौ करोड ९५ लाख ४५ हजार ४४५ र नबिल बैंक रु नौ करोड १४ लाख ९९ हजार ९०६ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भए ।
कारोबारका आधारमा न्यादी हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले ९.९९ प्रतिशतले कमाए । सामालिङ पावर ९.९८, सानिमा लार्ज क्याप ४.२८, कालिका पावर कम्पनी ३.६७ र स्वाभिमान लघुवित्तका लगानीकर्ताले ३.५९ प्रतिशतले कमाए । त्यस्तै, आइसिएफसी फाइनान्स १०, चन्द्रागिरी हिल्स ५.२०, महालक्ष्मी विकास बैंक ५, मानुषी लघुवित्त ४.६८ र उन्नती सहकार्य लघुवित्तका लगानीकर्ताले ३.९६ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १३, २०७८, १९:१७:००
शुक्रबार, माघ ७, २०७८ कोरोना संक्रमण जोखिमको बेला प्रभावकारी बन्दै अनलाइन श्रम स्वीकृति
बिहीबार, माघ ६, २०७८ ९९ श्रमिक इजरायल प्रस्थान, श्रममन्त्री र इजरायली राजदूतद्वारा बिदाइ
बुधबार, माघ ५, २०७८ बुधबारका मुख्य समाचारहरु : पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि देखी कोरोना परीक्षण शुल्कमा एकरुपता भएन सम्म
बुधबार, माघ ५, २०७८ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो
बुधबार, माघ ५, २०७८ अर्थमन्त्री शर्माको सक्रियतामा ४० हजारभन्दा बढीले गरे छुटमा कम्पनी विवरण अद्यावधिक
सोमबार, माघ ३, २०७८ सेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि, ७ अर्ब ९० करोडको कारोबार
शनिबारका मुख्य समाचाहरु : कोरोना हटस्पट बन्दै उपत्यकादेखि आइतबार देशभरका अदालत बन्द रहनेसम्म
कोरोना 'हटस्पट' बन्दै काठमाडौं उपत्यका, यस्तो छ तथ्यांक
गणेशमान स्मृति उद्यान निर्माणका लागि थप रु एक करोड सहयोग
स्वास्थ्य उपचार पछि माओवादी नेता पुन सोमबार नेपाल फर्कने
समुदायलाई आवश्यक परेको बेला नेपाल फर्केर अधिकारका लागि लड्छु : अध्यक्ष लामा
काठमाडौंमा आजदेखि कोरोना भाइरसविरुद्धको बुस्टर डोज सुरु, १७ स्थानबाट लगाइँदै